Soo Degso Waqooyiga Ameerika XB-70 Bob NASA FSX & P3D - Rikoooo
Woqooyiga Ameerika XB-70 Bob NASA FSX & P3D
downloads 20 182
Massimo Altieri, update by Bob Chicilo
Waayo, FS2004 kala duwanaansho ku socon riix halkan
Press "L" si aad u bilowdo saamayn afteburner. qol 2D waa Ahaan Ka Dhameystiran shidhka dalwaddii
The North American XB-70 Valkyrie ahaa noocooda qarxiyay a supersonic of 1950 Maraykanka daahay. Waxaa loogu talagalay by North American. Kaliya labo nuqul la dhisay, kuwaas oo mid ka mid ah ayaa la burburiyay shil.
Guuldaradii ee noocooda ah u saxiixi waaran dhimasho barnaamijka ee. Tani waa diyaarad advertising diyaarad, suxufiyiin badan Marag shilka at this mashiinka aad qaali u yihiin, waxa uu culeyskiisu yahay tons 250 oo uu jeer 10 lacag culeyska in dahab.
On 8 June 1966, noocooda labaad ka baxo Edwards AFC iyo inuu sii adkeeyo cabbirka of Hoargaysa Sonic. Waxaa intaas dheer, imtixaanka tani waxay u oggolaanaysaa General Electric, soo saaraha ah ee matoorada ku XB-70, qaadan photos of advertising diyaarad la F-4B Phantom II ah, F-104N Starfighter, F-5A Freedom Fighter iyo a T -38 Talon, oo dhan ku shaqeeya la matoorada ka General Electric. Laakiin-F 104, soo saaray in qas ka dib ee ay ka-XB 70 ah, ku dhuftay, oo burburiyey stabilizer bidix toosan. 16 ilbiriqsi ee horyaalka ka dib, qarxiyay uu faraha ka baxay, ka dibna ku burburtay.
Al White, ka pilot XB-70, saaray wakhtiga laakiin copilot Carl Cross waa awoodi waayeen in ay soo tuurid oo la dilay, oo ay la socdaan duuliyaha ah ee F 104, Joseph Albert Walker. (Source Wikipedia)
Author: Massimo Altieri, oo cusbooneysiiyay Bob Chicilo
Boeing 7072 Orion Supersonic gaadiidka FSX
1701 USS Entreprise Beddelka 2.0 FSX & P3D